Ilebhu YesiNgisi: Umhlahlandlela Ophelele Kule-Show-Ring Labrador Retriever - Izinhlobo
ILabrador Retriever kube uhlobo oluthandwa kakhulu eMelika iminyaka engama-29 isebenza, abantu abaningi bayalwazi futhi bayaluthanda lolu hlobo!
Muva nje, amagama athi I-English Lab kanye ne “American” Labrador avele kakhulu kwinethiwekhi yezinja .
Kepha, yini umehluko phakathi kwalezi zinja ezimbili? Ngabe bawuhlobo olufanayo? Kusho ukuthini ngempela ukuba yiLabrador yesiNgisi?
Ukuphendula lowo mbuzo (neminye eminingi), qhubeka ufunde umhlahlandlela wethu wokugcina walolu hlobo.
Ilebhu YesiNgisi Izala Imvelaphi
Imidlwane Yelebhu YesiNgisi
I-English Labrador Temperament
Ukubukeka Kwelebhu YesiNgisi
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwezinja
Izidingo Zokudla Nezokudla
Le nja yaziwa kakhulu ngemvelo yabo ethembekile futhi ethembekile, ukudlala nokudlondlobele njengezilwane ezifuywayo nezinja zomndeni.
Igama elithi Labrador laqala ukusetshenziswa eNgilandi ngasekupheleni kwekhulu le-19.
Ekuqaleni kwakubizwa ngokuthi iSt John's Dog noma i-Lesser Newfoundland, lawa ma-canine alethwa eNgilandi evela eCanada, lapho ayekade esetshenziswa khona ngabadobi ukusiza ukudonsa amanetha abo.
Idume ngokushesha e-UK, babhaliswa yiKennel Club ngo-1903 kanye neAmerican Kennel Club ngo-1917.
Kulezi zinsuku, mancane amathuba okuthi uthole lezi zinja endaweni yezibhamu (noma uhudule amanetha ethekwini), esikhundleni salokho, maningi amathuba okuthi ubone ohamba emasimini nomndeni wabo noma usize umuntu okhubazekile njengosizo inja!
I-English Lab vs. American Labrador - Uyini Umehluko?
Ngokuvamile, kuvame ukuqonda ukuthi amaLabradors akhuliswe emigqeni yokusebenza angamaLabradors aseMelika, kuyilapho iLabradors ekhuliselwe indandatho yombukiso ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-English Labrador Retrievers.
Uhlelo lokuqamba amagama luqhamuka lapho amagazi egazi ohlobo axhaphake kakhulu:
Khombisa imigqa yegazi ivame kakhulu e-UK
Ama-bloodline asebenzayo ajwayelekile kakhulu e-USA
Yize kunjalo umehluko wesakhiwo (okuxoxwe ngezansi), zisabhekwa njengohlobo olufanayo.
Lawa magama awazona izigaba eziqinile, kunalokho ayimihlahlandlela ewusizo kakhulu yokuchaza uhlu lwegazi lweLabrador okukhulunywa ngalo.
Usayizi Amasentimitha angu-21.5 kuya kwangu-22.5
Isisindo 70 kuya ku-80lb (abesilisa) no-60 kuya ku-70lb (abesifazane)
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-10 kuya kwengu-12
Uhlobo Lokuzala Iqembu leGundog
Ifanele i- Imindeni esebenzayo, abadala kanye nabangashadile
Umbala Igolide, Chocolate, Mnyama, Isiliva
Isimo Nobungane, Uthembekile, Uyanakekela, Uyadlala futhi Uyajabula
Amanye Amagama I-English Labrador Retriever
Le midlwane imnandi futhi inelukuluku lokwazi!
Ngokwesilinganiso, iLab izoba nemidlwane eyisishiyagalombili kudoti, kepha inani lingahluka phakathi kwesithupha neshumi nambili.
Ngenxa yokuthandwa kwabo, imidlwane ye-English Lab imaphakathi phakathi kwe- $ 600 ne- $ 1,200 USD.
Enamasonto ayisishiyagalombili ubudala ( lapho sebekulungele ukuletha ekhaya ) bazodinga ukwaziswa ngezinto eziningi, imisindo nephunga ukudala umdlwane onobudlelwano.
Ngezansi kuneshadi lokukhula elilinganiselwe elichaza ukukhula ngokomzimba kwalezi zingcosana.
Lesi isisindo esilinganisiwe, ngakho ungamangali kakhulu uma inja yakho ingamakhilogremu ambalwa ngenhla noma ngaphansi kwesilinganiso.
Kodwa-ke, uma inja yakho ikhuluphele ngokweqile noma isisindo esincane, lokhu kuzonikeza ithuba lokuya kudokotela wezilwane ukuze kuhlolwe impilo ephelele.
Ishadi Lokukhula KwePuppy
3 amashumi amabili
Lolu hlobo luvame ukungasebenzi ezinjeni nakubantu, esikhundleni salokho lukhetha ukuthola uthando nokudlala kumuntu ongamazi!
ILabrador yesiNgisi akwaziwa ukuthi iyiyo inja ekhonkotha ngokukhethekile , kunalokho bakhonkotha kuphela ukwazisa umnikazi wabo ngomsindo ongajwayelekile noma umuntu omusha emvelweni.
Ngenkathi iLabradors ijabulela umdlalo omuhle wokujaha nokulanda nsuku zonke, akunakwenzeka ukuthi izonyamalala lapho kushona ilanga ijaha ingwejeje noma ikati.
Esikhundleni salokho, maningi amathuba okuthi amakhala abo emhlabathini ahogele ukudla epikinikini enqamula epaki!
Lolu hlobo luvame ukuphawulwa ngezinga eliphansi lobudlova. Ngenxa yalokho, aziwa njengabaqaphi abahle noma izinja ezigadayo, ngoba maningi amathuba okuthi bagonane nomuntu ongenele kunokuzethusa!
Kuyaziwa ngemvelo yabo ethembekile futhi ezinikele , lokhu kwesinye isikhathi kungaholela ekulweni nezinkinga ezihlobene nokwehlukana.
Ngenxa yalokho, ukuqeqeshwa kwalokhu kufanele kuqale ngokushesha nje lapho umdlwane ulethwa ekhaya , ngokushiya umdlwane wakho isikhathi esifushane kakhulu (esingengaphezu kweminithi eli-1) bese ubuya.
Lokhu kuzofundisa iLab yakho yesiNgisi ukuthi ufika njalo ekhaya, futhi nezinto ezinhle ziza nawe.
ILabrador Retrieves idume umhlaba wonke ngobuntu babo, imvelo enothando nenothando, lezi zinja ezithandekayo zithwebula wonke umuntu abahlangana naye.
Amalebhu esiNgisi ayaziwa ngobuntu bawo obumnene.
Kodwa-ke, ungaphutha lokhu ngokungabi namandla, lezi zinja zithola ama-zoomies nsuku zonke futhi zidinga ukuzivocavoca okuningi!
Ngemuva kokuzivocavoca okuhle, bane-aura ehamba kalula eheha labo ababazungezile ngemvelo yabo ekhululekile bethulisa imindeni yabo.
Kuncike ekutheni ungaqhubeka nombuso wabo wokuzivocavoca, futhi ubanikeze isikhala abasidingayo, lezi zinja ezinenhliziyo enhle zilungele abantu abavela kuzo zonke izizinda zokuphila.
Amalebhu esiNgisi aziwa ngokuba yinja yomndeni yokugcina!
Ngombukiso wabo wegazi, uma nje behlalisene kahle, bazozwana nawo wonke amalungu omndeni.
Uma bethulwe besebancane, nabo bangazwana nezinye izinja, amakati, onogwaja, noma esinye isilwane umndeni wakho ongahle ube naso!
Qiniseka ukuthi wengamela izingeniso ekuqaleni ukuqinisekisa ukuthi zombili izilwane ezifuywayo ziziphatha ngendlela efanele bese uhlanganisa kancane lezi zinto ezimbili.
Yize i-English Labrador Retrievers baziwa kakhulu ngokubekezela kwabo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi zonke izinja zinendawo yokuphuka.
Ngakho-ke, yize kubalulekile ukufundisa i-pooch yakho ukuthi idlala kanjani nezingane zakho, kubalulekile ukuthi ufundise izingane zakho ukudlala nge-canine yakho.
Lolu hlobo lunomgqomo onjengomzimba, imilenze emifushane eyisiqu, amehlo anomusa nezindlebe ezisongiwe ezisemaphakathi.
Lezi zinja zinobukhulu obuphakathi nendawo, ziyisidudla futhi ziyabukeka kwezemidlalo.
Lolu hlobo luyaziwa kulokho okuchazwa ngokuthi 'umsila' wabo , ubude obumaphakathi, umsila ojiyile obukade usetshenziselwa ukubaphephetha emanzini njengephini lokuqondisa.
Ijazi labo libuye libe yisici sodumo lohlobo (ngaphezulu kulokhu okungezansi).
Ngenkathi amaLabradors aseMelika enkudlwana (21.5 kuye kuma-intshi ayi-24.5 amayintshi), amaLabhu amaNgisi anokwakheka okuncane, ame phakathi kwama-intshi ayi-21.5 no-22.5 ukuphakama (ngaphandle kobulili).
Ngokwesisindo, abesifazane bavame ukukala kancane ngaphansi kuka-60 no-70lb kanti abesilisa bavame ukuba nesisindo esiphakathi kuka-70 no-80lb.
Imibala eyamukelekayo yalolu hlobo, ngokwezinga le-AKC , yilezi:
Noma kunjalo ezimweni ezingavamile inja yakho ingaba yisiliva.
Akwamukelekile ukuthi noma iyiphi yalezi zinja ibe nemibala eminingi noma enemibala emithathu, esikhundleni salokho kufanele ibe umbala owodwa oqinile.
ILebhu lesiNgisi likhonjwa kalula ngengubo yalo emfushane, eqinile, eminyene emelana nesimo sezulu.
Yize abanye abanikazi bekhombisa okuhlukile, lolu hlobo kufanele lube nejazi elilodwa.
Amalebhu esiNgisi awuhlobo lokuchitheka oluphakeme kakhulu futhi ngenxa yalokho awafanelekile kubantu abanezinkinga zokwaliwa yizinja .
Lezi zingubo ezingashisi eziphakeme ezizodinga ukuzilungisa cishe nsuku zonke, ikakhulukazi ngesikhathi sokuphuma kwengubo yonyaka.
Zama ukusebenzisa ibhulashi lenjoloba ngokunyakaza okuyindilinga ukuze uqoqe hhayi zonke izinwele kuphela kepha unikeze inja yakho ukubhucungwa okuhle!
Lezi zinja ziyaziwa ukuthi zinesikhumba esibucayi, ngakho-ke zama ukugeza kuphela lapho kunesidingo. Lapho ugeza, sebenzisa i-shampoo enemithi ukuzama ukugwema noma yikuphi ukungakhululeki.
Qinisekisa ukuthi inja yakho yomile ngokuphelele, noma yimaphi amanzi abhajwe engutsheni yawo awukhuni angadala ukuthi isikhumba some.
Ngokungafani nezinye izinhlobo , Amajazi amaLabhu awadingi ukuthi agundwe. Kodwa-ke, badinga ukuhlolwa kwendlebe njalo nezinzipho zabo zigundiwe njalo.
Ama-English Labrador Retrievers ahamba phambili emakhaya amakhulu futhi avulekile (kuhle ngengadi).
Ifanele imindeni yazo zonke izinhlobo nobukhulu kepha idinga umnikazi noma abanikazi abangahambisana nempilo yabo esebenzayo.
Ukusetshenziswa Kokudla Kwansuku zonke
Umhlahlandlela Amakholori ayi-1 000
AmaLabradors aziwa njengabantu abadla kakhulu , uma lishaya phansi, i-English Labrador yakho izobe isilibhebhe ngaphambi kokuthi ulibone lishona phansi.
Ngokudla kwabo, lawa ma-canine adinga umthombo wamaprotheni osezingeni eliphakeme.
Ngokwesilinganiso, le nja izodinga ukudla izinkomishi ezi-2,5 zokudla / i-kibble usuku ngalunye; ngokufanele, lokhu kufanele kwehlukaniswe kabili noma kathathu, ukubeka isikhala ekudleni kwabo.
Lolu hlobo ludla ngokushesha, olungabhekana nezinkinga zezempilo, njengokuqunjelwa , ngakho-ke abanikazi kufanele bondle ama-Labs abo amaNgisi ukudla okuncane - okungcono kakhulu endishini yokuhamba kancane noma i-puzzle feeder.
Izidingo Zokuzivocavoca Zansuku zonke
Amaminithi Imizuzu engama-60
Lezi zinja zidinga ukuzivocavoca umzimba ngemizuzu engama-60, noma ngabe kuthatha ukukholisa okuncane ukuzikhiphela ngaphandle.
Ngokufanelekile, lesi sikhathi sokuzivocavoca semizuzu engamashumi ayisithupha kufanele sihlukaniswe ngezindlela ezimbili usuku ngalunye (imizuzu engamashumi amathathu lilinye). Eyaziwa ngokuthi uhlobo lokudlala kakhulu, ungadlala futhi ukulanda ukusiza ukushisa amandla.
Ama-English Labrador Retrievers athambekele ekubeni ngama-lazier amancane kunabazala bawo abasebenza eMelika.
Uma usuphumile futhi, amaLabhu aziwa ngokukhumbula okuhle lapho eqeqeshwa:
Uma uqeqeshwe kahle , abanikazi akufanele babe nenkinga yokubuyisa inja yabo
Uma kungafundiswanga kahle, abakwaLabradors baziwa ngokulandela amakhala abo (nezisu) futhi kungenzeka bazulazule
Amalebhu esiNgisi kukhona izinja ezihlakaniphe kakhulu futhi eziqeqeshwayo .
Akuvamile ukuthola lawa ma-canine esebenza njengezinja zensizakalo, esiza abantu abangaboni phakathi kweminye imisebenzi eshintsha impilo.
Lezi zinja ezihlakaniphile zikudla kakhulu futhi zidlala ngokukhuthazeka, okwenza kube lula ukuziqeqesha.
Banenhliziyo enkulu, futhi ngenxa yalokho abenzi kahle ngokujeziswa.
Uma ufuna ukuqeqesha iLab, hlala usebenzisa ukuqinisa okuhle futhi ugweme noma yiziphi izindlela zokuqeqesha ezibandakanya ukujeziswa.
TO ucwaningo olwenziwe yiKennel Club kukhombisa ukuthi izimbangela ezivame kakhulu zokufa kwalolu hlobo ngumdlavuza, izinkinga zenhliziyo nokuguga.
Okukhulu, futhi okukhulu kakhulu, ukukhathazeka kwezempilo kwe-English Labrador Retriever yi-hip ne-elbow dysplasia.
Lokhu kukholakala ukuthi yisimo esizuzwe njengefa, ngakho-ke kungenzeka ukukuhlolela lokhu kubazali ngaphambi kokuthenga umdlwane.
Kodwa-ke, uma uhlela ukwamukela, lokhu kungenzeka kungabi inketho esebenzayo.
Isifo sokuwa naso yisimo esivame ukuqhathaniswa kule canine. Yize lokhu kungabonakala kusabisa, umuthi wesimanje wezilwane wenza ukuphatha inja ephethwe yisifo sokuwa kube lula.
Ngokwesilinganiso, iLab Lab izophila phakathi kweminyaka eyi-10 nengu-12!
Ilebhu yesiNgisi igama lesimanje lenja (yohlu lokuhlukaniswa kohlobo lweLabrador) elivela ku-show yegazi.
Zibizwa ngale ndlela ngoba zivame kakhulu eNgilandi kunaseMelika.
Isethi esinda kancane kunabazala babo baseMelika, amaLabradors esiNgisi ayizinja ezinothando neziqotho ezizothola indlela eya enhliziyweni yanoma yimuphi umnikazi noma abanikazi.
Muva nje uthole umdlwane, kepha awuqiniseki ukuthi uzomubiza ngokuthini? Thola uhlu lwethu lweziphakamiso Amagama omdlwane weLabrador.
Sazise imicabango yakho ngalolu hlobo oluhle olungezansi.
Umhlahlandlela womnikazi wenja kuTeacup Yorkie ethandekayo, epeyinti
ICoripoipo: Konke Okufanele Ukwazi Mayelana Ne-Corgi Poodle Mix
angakanani amabhakhili ephaketheni afika
husky umalusi waseJalimane ukuxuba isisindo
inkulu kangakanani inja yetiacup
izithombe zomxube we-maltese poodle